Sen. Farole oo dowladda federaalka ku eedeyay habaca geedi-socodka dastuurka, federaalaynta iyo faragelinta dowlad-goboleedyada – Kalfadhi
Sen. Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole oo mar madaxweyne ka soo noqday Puntland ayaa galabta ka hadlay geedi-socodka dastuurka dalka iyo sax ahaanshaha hannaanka looga shaqanayo, wuxuu kaloo ka hadlay faragelinta dowladda federaalka ah ee dowlad-goboleedyada.
Mar uu garoonka Gen. Abshir ee Garowe ku soo dhoweeyay inta badan xubnaha aqalka sare ee laga soo doorto Puntland oo la tashi xukuumadda iyo golaha wakiillada ah u soo noqday, ayuu sheegay inuu waddo khadlan ku socdo dhamaystirka dastuurku.
Wuxuu sheegay in dadkii dastuurka ka shaqayn lahaaba aysan weli shaqo bilaabin, isagoo xusay in ay jireen xubno farsamo oo dowlad-goboleedyada ka iman lahaa isla markaasna qayb ka ahaa geedi-socodka dhamaystirka dastuurka, arrintaas ayuu ku eedeyay in dowladda federaalku hor istaagtay.
Mar uu ka hadlayay arrinta federaalaynta dalka oo uu sheegay in uu yahay xalka ay Soomaaliya dowlad ku dhisan karto ayuu yiri
“Ninkii is leh wax baad ka bedeli kartaa waa inuu ogaadaa qol buu ku xiran yahay federaal la yiraahdo oo furihii ay maamulada iyo aqalka sare haystaan,” ayuu Sen. Farole isagoo arrintaas si toos ah ugu jeediyay xafiisyada madaxweynaha, ra’isal wasaaraha iyo la taliyaashooda gaarka ah oo uusan carrabaabin.
Sen. Faroole wuxuu dowladda federaalka ah ku eedeyay in ay farageliso doorashooyinka dowlad-goboleedyada, wuxuu xusay dhibaatadii ka dhacday koonfur-galbeed. Wuxuu kaloo sheegay in ay lacag tiro badan ay dowladdu ku qarqisay doorashadii Puntland si weynna ay u gacan-gelisay, balse aysan arrintaas ka gaarin dantii ay ka lahaayeen oo ay ku guuldaraysteen.
“21kii xubnood ee tartamaayey anigu ma garan karo cidda aan wax la siin, laakiin waxaan is leeyahay badidood lacag baa la soo siiyay, in la carqaladeeyo in aysan ka soo bixin doorasho xaq ah oo xalaal ah….Waxaa hadda taagan arrinta Jubbaland” ayuu yiri Farole.
Wuxuu sheegay in dalku uusan meel wanaagsan u socon.
Sen. Juriile oo ku baaqay in xili hore laga tashto nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa iyo qorshaha lagu gaarayo